Maalinta: Abriil 17, 2018
Gaadiidka iyo farxadda nolosha ayaa loo sheegay ardayda Gaziantep
Marka la eego baaxadda “Farxadda Nolosha ee lagu Wacyigelinayo Gaadiidka Gawaarida Hazırlanan ee ay diyaarisay Gaziantep Magaalo-weyne, waxaa la soo bandhigay soo-jeedinno lagu kordhinayo wacyiga waddooyinka ee ardayda dugsiga hoose iyo buugaagta midabaynta ayaa loo qaybiyay ardayda. Taabashada dhammaan qaybaha bulshada, Metropolitan [More ...]
ARUS Xubinimadda Gaadiidka Kayseri, waxay martay jagada madaxweynaha TÜRSİD
2017, wuxuu ka soo shaqeeyey Madaxweyne kuxigeenka iyo Madaxa Qaybaha Nidaamka Raadiyaha Qaabka ee Xiriirka Caalamiga ah ee Gaadiidka Dadweynaha (UITP), kaasoo ka shaqeeya waddanka 96 isla markaana xubin ka ah shirkadda 1500. guud [More ...]
Xarunta Madaxa ee Beddelka ee Ankara
12, oo keenay nidaamka Kaya Ka-Sincan ee tareenka dhulka hoostiisa oo loo soo bandhigo adeegga caasimadaha Abril 2018, ayaa la bilaabay inuu ku hawlgalo Başkentray TCDD Taşımacılık AŞ. 36 kiiloomitir oo dherer dhererkiisu yahay kiiloo mitir oo ay weheliso mid ka mid ah 'HAT Eryaman' [More ...]
Sida Eskisehir, Adana waa la jebiyey
Sidoo kale khadka tareenka ee Cusbitaalka Kayseri ee ay leedahay Wasaaradda Adana ayaa lala kulmay falcelinta. Wargeyska gobolka, "Kayseri, ma jiro Adana" ayaa laga faallooday cinwaanka. Qadka tareenka ee tagi doona isbitaalka magaalada ee Kayseri waxaa dhisi doona Wasaaradda. [More ...]
Wuxuu la barwaaqaysan in Miisaaniyadda Project Gaadiidka Turkiga
Natiijooyinka miisaaniyadda Maarso ayaa la shaaciyey. Sidaa daraadeed, xogta rubuc -laha ah ayaa lagu siidaayay hirgelinta miisaaniyadda 2018. Baahsanaanta soo iibsiga dowladeed ee la xiriirta mashruucyada gaadiidka, gaar ahaan Wadooyinka Waaweyn, ilaha miisaaniyada iyo kharashyada. [More ...]
Tareenka Nostalgic ee Antalya
Matxafka 'Zerdalilik-Museum ee u dhexeeya' Nostalgic tram ', kaas oo u adeega gawaarida gaarka loo leeyahay ee adeegsada wadada labadaba waxay farageliyaan gaadiidka waxayna sababaan shilal. Wadada loo yaqaan 'Nostalgicramramram' oo u adeegta inta u dhaxaysa Zerdalism iyo matxafka ayaa hoos yimaada shaqada. Qaabkaan gawaarida [More ...]
Truck iyo Bus Turos Selection ee Turkey ayaa Brisa
2017 3% ee Turkey koray hoggaanka suuqa ay taayir baabuur ganacsi Brisa sii waday talaabo, iyadoo wax soo saarka iyo adeegyo cusub oo dunida dacaladeeda ku wadda inay la Wadaage mashruuca weyn. Turkiga [More ...]
RayHaber 17.04.2018 Warbixinta Shirka
Iibsashada Qalabka Waxyeeleynta Dabbaaslaha Gaashaandhigga Waxaa Lagu Sameyn Doonaa Bar Xilliga UIC 60 maqasyada waxaa la Iibsan doonaa Bukaanno Fudud Oo Walxaha Waxaa Lagu Soo Iibsan Doonaa Jidka Tareenka Waa La Adeeg Doonaa Adeeg Shaqaale Waad Heshay [More ...]
Sanadka Dahabiga ee Istanbul oo leh 3 Airport
Duqa Magaalada Caasimadda Istanbul Mevlüt Uysal, oo ka qeybgalay furitaanka Toddobaadka Dalxiiska, ayaa yiri, “Istanbul waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu dalxiiska badan adduunka. Xitaa waxbadan ayaa jira. Waxaan u nimid dalkayaga sidii dalxiisayaal guryaheena u imaada [More ...]
GAZIRAY waxaa la qorsheeyey in la dhammeeyo dhamaadka sanadka 2018
Dib-u-habeynta Başpınar-Gaziantep-Mustafa Yavuz Saldhigyada inta u dhaxaysa xarummaha 25 iyo 17, kuwaas oo isku xiraya Gaziantep Yar-yar ee Warshadaha iyo Aagga Wershadaha abaabulan, oo ay diyaarisay Dawladda Hoose ee Gaziantep si ay u fududeyso gaadiidka magaalada. [More ...]
Mashruuca Nidaamka Tareenka ee Trabzon Light ee Wasaaradda Gaadiidka
Markii Mashruuca Nidaamka Tareenka Iftiinka, oo loo qorsheeyay in laga dhiso Trabzon, aan la bilaabi karin, garashada heerka miisaaniyadda ayaa wali kusii jira 55.… Duqa Magaalada Gümrükçüoğlu wuxuu cadeeyay in mashruucan lagu fulinayo Agaasimaha Guud ee Kaabayaasha. Dawlada Hoose ee Trabzon [More ...]
Dab-demiska Baabuurta Bannaanka ee Haydarpaşa Station
Xarunta tareenka ee Kadikoy Haydarpasa, khadadkii hore ee tareenka ee maraakiibta madhan ayaa qarxay intii dabka socday. Waqtiga 16.15 darajooyinka goobta dab damiska ayaa yimid goobta iyadoo ay ugu wacan tahay kororka oo la bakhtiiyay. DABKA [More ...]
TCDD ee Edirne iyo Kırklareli
Khadadka tareenka iyo saldhigyada gudaha xudduudyada Edirne iyo gobolka Kırklareli, buufinta waxaa lagu sameyn doonaa baaxadda xakamaynta haramaha inta u dhaxaysa 16-25 April 2018 Sababo la xiriira isticmaalka sunta cayayaanka oo khatar u ah caafimaadka dadka iyo xoolaha, [More ...]